ဘုရားကျောင်းပွဲ နှစ်(၄၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲ - Mandalay Catholic Archdiocese
ဘုရားကျောင်းပွဲ နှစ်(၄၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲ
posted6Jun 2013, 23:38 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated6Jun 2013, 23:56 ]
မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ် သာသနာချောင်းရိုးရွာ ခရစ်ယာန်တို့အား မှိုင်းမတော်မူသော မယ်တော်ပွဲနှင့် နှစ်(၄၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော်ကို 23.5.2013 ညနေ ၅း၀၀ နာရီ တွင် ကျေးဇူးတင် မစ္ဆားကို ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖာသာရ် A တင်ထွန်း ဦးဆောင်၍ Fr. ပီတာ စိန်လှိုင်ဦးမှ ကိုယ်တော်မြတ် စက္ကရမင်းတူး အကြောင်း သြ၀ါဒ မိန့်ကြားခဲ့၏။
မစ္ဆားအပြီး စိန်ဂျိူးဇက် သီလရှင် ၀ါတော် (၅၀)ပြည့်ရွှေဂျူဗလီရှင် Sr.Lydia နှင့် Sr.Loaetitia တို့အား နှုတ်ဆက် သီချင်းများ ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်များ ဆက်ကပ်ခဲ့၍ Sr နှစ်ပါးတို့မှ အတွေ့အကြုံများနှင့် ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားခဲ့၏။
ညပိုင်းတွင် Fr .ဂျော့ ခင်မောင်ထွေးမှ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သာသနာရောက် ရှိခြင်း သမိုင်းကြောင်း၊ Fr.John စိုးတင့်မှ ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်းဟောကြား ခဲ့၏။
24.5.2013 နံနက် ၇း၀၀ နာရီတွင် Fr. ပီတာ လှရွှေ ဦးဆောင်ပြီး ခရစ်ယာန်တို့အား မှိုင်းမသော မယ်တော်ပွဲ မစ္ဆားဟောကြားရာ ကလေးငယ် (၆၇) ဦး ပထမ ကိုယ် တော်မြတ် ခံယူကြ၏။ ပွဲတော် မစ္ဆားအပြီး ချောင်းရိုးရွာ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ အရ ရဟန်း၊ ကိုရင်၊ သီလရှင်များအား နှုတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပရာ အလှူငွေ ဆက်ကပ်ခြင်း၊ နှုတ်ဆက် သီချင်းများ သီဆိုခြင်း၊ Fr. တင်ထွန်း မှကျေးဇူးတင် စကားပြောကြား ခဲ့၏။ ညနေ ၅း၀၀ နာရီတွင် ခရစ်ယာန်တို့အား မှိုင်းမသော မယ်တော်၊ ပရိတ် သူငယ်တော် ဆင်းတုအား ကျေးရွာ တပတ်လှည့်ကာ၊ ကိုယ်တော်မြတ်ကောင်းချီးဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့၏။